I-Vionlabs 'esandula ukusungulwa kwePlat Discovery Iplato ephumeleleyo yoMboniso oBalaseleyo kwi-IBC2019 | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » I-Vionlabs 'esandula ukusungulwa yePlat Discovery Platform iphumelele i-Best of Show e-IBC2019
IStockholm, eSweden, 19 ngoSeptemba, 2019 - I-Vionlabs, ivakalise ukuba iplatform ye-AI-powered Discovery yesiCwangciso seMidlalo siphumelele i-TVB Europe Best of Show ibhaso kwi-IBC2019. Amagqabantshintshi nge-IBC Best of Show amabhaso ahlelwe ngoPapasho lweKamva kwaye abhiyozela ubuchule kunye nokugqwesa kubuchwephesha beendaba kunye nokuzonwabisa obusungulwe kunyaka ophelileyo ukusuka kwiinkampani ze1,700 ezibonisa iinkampani kolu lwasasazo lonyaka kunye nomdlalo wevidiyo.
Ophumeleleyo uyayibona impembelelo yentengiso yeqonga lokufumanisa umxholo weVionlabs njengesixhobo esingamava somsebenzisi. Abathengi banamhlanje bachitha i-25% okanye ngaphezulu kwexesha lesikrini bejonge into abayibukele. I-Vionlabs idale iqonga layo lokufumanisa umxholo ukusombulula lo mngeni wentengiso kunye nokubonelela abathengi ngeziphakamiso ezenzelwe wena kunye nokukhuthaza ukubandakanyeka komsebenzisi. Iqonga lokufumanisa umxholo weVionlabs lisebenzisa i-AI kunye nomatshini wokufunda ukuhlalutya ividiyo nganye kwiinkcukacha ezininzi kunye nokudibanisa oku nembali yokubukela.
"Ukwenza ukuba amatyala ethu esidlangalaleni kwi-IBC ibe lixesha elimnandi kuthi, kwaye sinoyolo ukufumana imbasa ye-Best of Show kwiinyanga nje ezimbalwa emva kokusungula iqonga lethu lokufumanisa umxholo," utsho. UMarcus Bergström, CEO, Vionlabs. "Ibhaso sisiqinisekiso esingaphezulu sokuba iqonga lethu lokufumanisa umxholo we-AI lisombulula ingxaki ephazamisa abathengi mihla le ngokwenza utshintsho kumxholo."
Ukuveliswa kokufunyanwa komxholo
Iqonga lokufumanisa umxholo weVionlabs lihlalutya ividiyo nganye ngokweenkcukacha kwaye idibanise oku nembali yokubukela. I-Vionlabs iqeqeshe ii-injini ze-AI ezininzi ukulinganisa eziguquguqukayo kwividiyo, njengombala, isantya, iaudio kunye nezinye izinto ezininzi ezahlukeneyo ukuvelisa umda wexesha lomnwe kuwo wonke umxholo. I-AI ithelekisa iminwe nganye kunye nayo yonke enye iminwe yokulinganisa ngomlinganiso ngokuchanekileyo phakathi kwezinto zonke ezikwilayibrari yevidiyo.
Injini ye-AI ifunda ukuba yeyiphi na into kunye notshintsho kula maxesha esibonisa ukuhambelana kwemigca yomnwe. Ukwazi ukufana phakathi komxholo kubalulekile, kodwa akwanelanga ngokwakho. UVionlabs uye waqeqesha injini ye-AI ukuhlalutya imbali yokubukela. Okokugqibela, ine-injini ye-AI ethatha iziphumo zezinye ii-injini ze-AI ukubonelela ngeqonga lokufumanisa umxholo elona.
Iqonga leVionlabs sele lisetyenziswa ngabanikezeli beenkonzo zomxholo ukuhambisa umxholo ofanelekileyo ngexesha elifanelekileyo kwaye kukhokelele ekuphakanyisweni okubalulekileyo kwexabiso lokuthengwa kweVOD kunye nokuzibandakanya.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Igalelo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC TVU Networks Injini yeVidiyo 2019-09-19
Previous: Umshicileli / Umhleli Wevidiyo
next: I-GlobalConnect ihambisa i-Nevion Virtuoso kunye neVidiyoIPath yemveliso ekude kunye negalelo